I-Dense Corundum eshinyeneyo
Ifakwe iAlumina Magnesia Spinel
Amaziko aphambili oPhando
1. IZiko laseShanghai loPhando ngeSilicon, iTshayina iAkhademi yeSayensi
2. IPhondo leHenan Microcrystalline Oxide Engineering Centre
3. IZiko lobuGcisa beShishini laseHenan
4. IZhengzhou Fine Ceramic Engineering Technology Centre
5. IZiko leTekhnoloji yezoBunjineli bePower yeZhengzhou
Kukho igumbi lohlalutyo lweekhemikhali, igumbi lokuvavanywa kokusebenza komzimba, inkqubo yelebhu kunye nelabhoratri yesicelo. Inkqubo yophando kunye nophuhliso eneempawu ezininzi zealumnium yenziwe ngezixhobo kunye neendlela ezizeleyo.
Izixhobo zoVavanyo lwe-R & D eziPhambili
1. IJapan Iskena ngombane iMicroscope
2. IJamani Sympatec Laser Particle Sizer
3. Isantya esiphezulu somhlaba othile kunye nesicazululi sokuvula
4. Umatshini oguqa ukugoba umatshini
5. I-1700 test yodongwe kuvavanyo lokudubula iziko lombane
6. Ukuxinana okuzenzekelayo kwemitha
Amacandelo ama-6 oPhando lwezeNzululwazi
1.Iziko leShanghai leCeramics, iTshayina lezeNzululwazi
2. ILuoyang Refractory Research Institute yaseSinosteel
3. IZiko loPhando laseChina lokuGaya
4.Iziko lobuNjineli beZinto, iYunivesithi yaseHenan yeTekhnoloji
5. IZiko loPhando leShanghai Baosteel
Intsebenziswano kula macandelo ikhokelela kuphuhliso lweshishini kwaye ibonelela ngenkxaso eyomeleleyo kwezobuchwephesha kuphuhliso oluzinzileyo lweQela leYUFA.
I-YUFA ihlala inyanzelisa ukuba zonke iimveliso zingathengiswa kuphela emva kokudlula kuhlolo lomgangatho. I-YUFA inelebhu yayo yokuhlola umgangatho kunye novavanyo lwabasebenzi. Ukusuka kwizixhobo ezingena kwifektri, ukunyibilikisa iziko, iimveliso ezigqityiweyo zokuqala, ukutyumza, ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo zokugqibela ezishiya umzi-mveliso, i-YUFA yenza uhlolo ngokweedosi ezahlukeneyo kwaye idityaniswe nemilinganiselo yokuhlola yenkampani. Elona nani lisezantsi lokuhlolwa lixesha elili-10, kwaye elona liphezulu lingaba ngaphezulu kokuhlolwa okungama-40.
Qaphela: xa ibhetshi ingaphezulu kweetoni ezingama-20, isampulu yenziwa ngebhetshi.
Iimveliso ezingaphandle komzi-mveliso kufuneka zihlolwe ngokwemigangatho. Ukuba zonke izinto ziyahlangabezana neemfuno zobugcisa, ibhetshi yeemveliso iyafaneleka. Ngexesha lokujonga esemgangathweni kunye nokuhlolwa, iimveliso ezihloliweyo zahlulwe zaziindawo ezahlukeneyo zesayizi yamasuntswana. Ngokungahleliwe khetha ubungakanani bamasuntswana esampulu kubo.
Inombolo 1 Wanquanhe Road, iSithili saseShangjie, isiXeko saseZhengzhou, kwiPhondo laseHenan, China